နေပယ်နှင့်၎င်း၏ဆွဲဆောင်မှု | ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | italia, ကြည့်ဖို့ဘာလဲ
အီတလီမှာအကြီးဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တယ် နေပယ်မြို့, Campania ၏မြို့တော်။ ၎င်းသည်နှစ်ထောင်ချီသောသမိုင်းကြောင်းရှိပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်လူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက်ခရီးသွား great ည့်သည်ကောင်းသည့်နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
နေပယ်၏သမိုင်းဝင်စင်တာဖြစ်ပါတယ် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် ဒါပေမယ့်၎င်း၏စိတ်ဝင်စားဖို့သောနေရာများသာရှိအာရုံစိုက်ကြသည်မဟုတ်။ ဒီအီတလီမြို့ကိုသွားဖို့စိတ်ကူးကိုနှစ်သက်ပါသလား။ ခရီးသွားသူမှာဘာရှိတယ်ဆိုတာကြည့်ရအောင်။
ငါတို့အရင်ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းနေပယ်လ် ၎င်းသည်အလွန်ဟောင်းနွမ်းသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးနှစ်ပေါင်း ၂၈၀၀ ကျော်သမိုင်းကြောင်းရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သမိုင်းဝင်တန်ဖိုးရှိသောအဆောက်အအုံများနှင့်နေရာများကိုတွေ့ရှိရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှေးဟောင်းသုတေသနနေပယ်လ်၊ အလယ်ခေတ်နှင့်သဘာဝနေပယ်လ်အကြောင်းပြောဆိုနိုင်သည်။ ထိုအခါငါတိုတောင်းသောကျဆင်းနေထင်ပါတယ်။
ဒါဆိုစကြရအောင် ရှေးဟောင်းသုတေသန Naples။ မြို့သည်အပျက်အယွင်းများနှင့်နီးသည် Pompeii နှင့် Herculaneum နေပယ်တွင်ဂရိခေတ်မှအခြားအပျက်အယွင်းများလည်းရှိသည်။ ကျနော်တို့ထို့နောက်ရှိသည် Campano ပွဲကြည့်စင် နှင့် Flavio ပွဲကြည့်စင်, ဥပမာ။ The San Gaudioso ၏ Catacombs ဥပမာ Basilica Santa María della Sanitáနှင့် San Gennaro တို့၏လက်အောက်တွင်ရှိသည်။
အဲဒီမှာ သုသာန် delle Fontanelle နှင့် "ရှေးဟောင်းသုတေသနဥယျာဉ်များ": Herculaneum, Paestum, Pompeii, Elea Velia, Cuma နှင့် Baia ။ ဤအပျက်အယွင်းများထဲမှ Pompeii နှင့် Herculaneum တို့သည်သင်အချိန်အနည်းငယ်သာရှိပါကသင်မမှတ်မိသောအရာများဖြစ်သည်။ ပိုရက်များနှင့်အတူငါအခြားမည်သည့်ထွက်ခွာမည်မဟုတ်။ Pompeii တွင် Iside ဘုရားကျောင်း၊ ပြဇာတ်ရုံ၏အပျက်အယွင်းများ၊ Faun အိမ်၊ Villa dei Misteri နှင့်အိမ်များ၊ ဈေးဆိုင်များ၊ ဖိုရမ်၊
နေပယ်လ်မြို့မှ Pompeii သို့ရထားနှင့်ဘတ်စကားဖြင့်သွားနိုင်သည်။ လတစ်လ၏ပထမတနင်္ဂနွေသည်အခမဲ့ဖြစ်သော်လည်းဝင်ပေါက်မှာ ၁၅ ယူရိုဖြစ်သည်။ ယူရို ၁၈ ဒေါ်လာဖြင့်ရှေးဟောင်းသုတေသနနေရာ ၃ ခု (Pompeii, Oplontis နှင့် Boscoreale) သို့သင်သွားနိုင်သည်။ အဆင်ပြေပါတယ်
Herculaneum ၏အပျက်အယွင်းများတွင်ဖိုရမ်၊ Argo အိမ်၊ Ariside ၏အိမ်၊ အပူရေချိုးကန်များ၊ အားကစားရုံများနှင့်ပြဇာတ်ရုံနှင့်လူပေါင်း ၂၅၀၀ အတွက်စွမ်းရည်ပြသည့်ပြဇာတ်ရုံသို့ပို့ဆောင်သော Decomomus နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ , ဥပမာ။ အနီးအနားတွင် Vesuvius မီးတောင်ပေါက်ကွဲခြင်းမတိုင်မီရှေးဟောင်းမြို့တော်၏နေ့စဉ်ဘဝကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်သော virtual ပြတိုက်ဖြစ်သော MAV လည်းရှိသည်။
နေပယ်မှရထားဖြင့်မိနစ် ၄၀ ကြာသည်။ ဝင်ပေါက်က ၁၁ ယူရိုပါ။ ဒါပေမယ့်သင် Naples Pass ရှိရင် ၅ ဒေါ်လာ၊ ၅၀ ပေးရမယ်။ ယေဘူယျအားဖြင့်နံနက် ၈:၃၀ မှ ၇:၃၀ အထိဖွင့်သော်လည်း၊ ၎င်းသည်လနှင့်ကွာခြားသောကြောင့်သင်မသွားမီစစ်ဆေးပါ။ သင်သမိုင်းကိုကြိုက်လျှင်ဤလူသိများသည့် ဦး တည်ရာနှစ်ခုကိုချန်ထားပါ Boscoreale ၏အမျိုးသားရှေးဟောင်းပစ္စည်း ၎င်းသည်အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ထိုဒေသရှိလူတို့၏နေ့စဉ်ဘဝကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသောနေရာဖြစ်ပြီးလှပသောနေရာဖြစ်သည် Villa Regina အပျက်အယွင်းများ, ပုံမှန်ရောမ villa ။
ထိုအခါငါတို့အကြောင်းပြောဆိုရန်ရှိသည် အလယ်ခေတ် naples နှင့်၎င်း၏ရဲတိုက်။ တကယ်တော့မြို့ကိုလူသိများတယ် "ရဲတိုက်ခုနစ်ခု၏မြို့တော်", သို့သော်သင်လည်ပတ်ရန်သုံးခုနှင့်အတူသင်အဆင်ပြေပါလိမ့်မည်: Castle dell'Ovo, Castle Sant'Elmo နှင့် Castle Maschio Angioino ။
ရဲတိုက် dell'Ovo သည် Naples ရှိရှေးအကျဆုံးဖြစ်သည် Santa Lucia ဆိပ်ကမ်းရှေ့တွင်ကျွန်းငယ်လေးပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသည်။ ၁၂ ရာစုမတိုင်မှီတွင် General Lucio Vicinio Luculo ၏ရောမ villa ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ရောမခံတပ်များရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သည်။ ဖရက်ဒရစ် ၂ သည်အရာအားလုံးကိုရဲတိုက်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့ပြီးခံတပ်အားမြေအောက်ခန်းရှိလှောင်အိမ်ထဲ၌ Virgil ထားရှိခြင်း / ဝှက်ထားခြင်းဖြစ်နိုင်သောဥကိုရည်ညွှန်း။ Egg Castle ဟုအမည်ပြောင်းခဲ့သည်။ ဝင်ကြေးအခမဲ့
El Castel Sant'Elmo (သို့) Saint Elmo ၏ခံတပ် ၁၆ ရာစုအတွင်းရှိ Don Pedro de Toledo ကထိုအရာကိုအသွင်ပြောင်းခဲ့သည်။ ၎င်းသည်မြေအောက်ခန်းများနှင့်ကျုံးများပါသည့်ခြောက်ချောင်းရှိသောကြယ်တစ်လုံးနှင့်တူ၏။ ၎င်းသည်မြို့ကိုခုခံကာကွယ်သင့်သော်လည်းတစ်ချိန်တည်းတွင်ထိန်းချုပ်သင့်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်စပိန်ရပ်ကွက်နှင့်ပလာဇာရီးရယ်လ်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ဒီနေ့ ပြတိုက်ဖြစ်တယ် နှင့်လှပသောမြင်ကွင်းကျယ်ကိုကယ်တင်။ ဝင်ကြေး ၅ ယူရိုဖြစ်ပါတယ်
နောက်ဆုံးတွင် Castel Maschio Angioino အဆိုပါ Piazza မြူနီစီပယ်ပေါ်မှာ။ ၎င်းသည် ၁၃ ရာစုတွင် Carlos I d'Angio အမိန့်ဖြင့်တည်ဆောက်ခဲ့သောပထမဆုံး Neapolitan Neapolitan ဘုရင်စနစ်လက်ထက်မှစတင်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ဘုရင်များသည်သူတို့၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးယခုပုံစံသည် Aragonese ၏လွှမ်းမိုးမှုလက်ထက်မှစတင်ခဲ့သည်။ ဒီနေ့ ၎င်းကိုaည့်သည်နှင့်လည်ပတ်ပြီးဝင်ပေါက်မှာယူရို ၆ ဒေါ်လာဖြစ်သည်.
ကျနော်တို့ Naples သဘာဝဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်ကပြောသည်။ သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် Castelcivita ၏ Grotto, အ Gruta di Pertosa-Auletta မီးတောင်နှစ်ခုနှင့်အကျော်ကြားဆုံး ဗီဆူး နှင့် Solfatara မီးတောင်။ ဗီဆူးဗီးယပ်စ်ကိုသိခြင်းသည်သမိုင်းတစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်နေသည်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာဖြစ်သောသဘာဝဥယျာဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သစ်ပင်များနှင့်သတ္တဝါများကိုလေးစားရန်၎င်းကိုတက်ပြီးအရာအားလုံးအထက်မှစိတ်ကူးကြည့်နိုင်သည်။
ပြတိုက်များအရနေပယ်လ်တွင်စိတ် ၀ င်စားစရာများစွာရှိသည်။ သို့သော်အားလုံးသည်သင်ကြိုက်သလောက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ငါငါ့အဘို့, ထိုသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ရွေးချယ်လိမ့်မယ် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုပြတိုက်, ဝိုင်ပြတိုက်, San Lorenzo Maggiore umentရာမအဆောက်အအုံ, Virtual ရှေးဟောင်းသုတေသနပြတိုက်, Acropolis ပြတိုက်, Villa dell'Antica Capua ပြတိုက်, Gladiator ပြတိုက်သို့မဟုတ်နေပယ်တော်ဝင်နန်းတော်။ ဤရွေ့ကား Naples ရှိနှင့်ငါအနုပညာပြတိုက်များပယ်ဖျက်ခဲ့ကြသောများစွာသောပြတိုက်တွေထဲကတချို့ပါ။ ဒါပေမယ့်သင်ပလတ်စတစ်အနုပညာကိုကြိုက်နှစ်သက်လျှင်များစွာသောရှိပါတယ်။
သင်၏အကြံအစည်သည်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုလမ်းလျှောက်ရန်ဖြစ်သည်ဆိုပါစို့ နေပယ်ကနေတစ်ရက်ခရီးတွေအကြံပြုနိုင်သောကွန်ရက်စာမျက်နှာများသည် - Capri, Amalfi, Eremo dei Camaldoli, Ischia, Sorrento, Pozzuoli or Procida။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အာမလဖီသို့၊ လိုအပ်လျှင်သင်သည်ဒေသန္တရရထားဖြင့် ၂ နာရီအတွင်းရောက်ရှိသည်။
နေပယ်မှာခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုခံစားရန်သင်ရရှိနိုင်သည် Naples Pass, ခရီးသွားကဒ် ဆိုင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ဟိုတယ်များနှင့်ပြတိုက်များ၌ ၄၀% လျှော့စျေးပေးထားသည်။ ထို့အပြင်သင်မြို့တွင်းရှိအများသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
ဗားရှင်းသုံးမျိုးရှိပါတယ်။ ၃ ရက်၊ ၇ ရက်နှင့်တစ်နှစ်လုံး။ ၂၅ နှစ်အထိ ၃ ရက်ကြာသွားသည့် ၂၉ ယူရိုနှင့် ၁၃ ယူရိုအပါအ ၀ င်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ပြတိုက်များကိုအသုံးပြုသည်။ ၂၅ နှစ်ကျော်ကြာ ၇ ရက်ကြာနေပယ်လ် Pass ကို ၄၉ ယူရိုနဲ့ ၁၀ ခုအတွက်မင်းပြတိုက်တွေဝင်ခွင့်ရှိတယ်။ အဆိုပါ pass အတွက် Pompeii မှဝန်ခံချက်ပါဝင်သည်ပါဘူး ကောင်းမွန်သောခရီးစဉ်!
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » Getaways ဥရောပ » italia » နေပယ်နှင့်၎င်း၏ဆွဲဆောင်မှု